(Waxaa laga soo toosiyay Wikipedia:Xog caddeyn)
Asharaf xasan iyo xuseen waa beel degta koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga soomaaliya. Waa umad aan helin nasiino iyo meel aan lagu tarxin awoowgood Ibraahim ka dib. GENERAL Dhalashadii Cismaaciil ilaa maantadaan la taagan yahay.
Cismaaciil waxuu ku dhax dhashay Carab , markii ay gaareen waqti ay meel qabsan karaana, weey ka kala daadatay oo waxaa maskaxdooda gashay diin faafin , naaga jeceeyl,iyo hanti. Kuwii haweenka ,dagaalka iyo hantida jeclaa waxeey aadeen Europe iyo Asia mana aheeyn kuwo leh lucky dagaal balse waxeey heleen naago iyo Dad fiican oo ay ka mid noqdaan.
Qeeybta dhowrsatay ee raacday xigmada black stone-ka horayna waxeey u qaateen waxeey heli kareen oo ay ugu weeyn tahay contact ga Alle , waxeey is guursadeen dadkii Africa si daneeysi iyo diin faafin ah.
waxeey qaateen magaca Asharaaf oo hada ay wadaagaan dadka lahaa ee Xusseen iyo Xasan ah iyo dhamaan Dadka jecel oo ay ku jiraan European, Asian iyo Xasanigii ka soo baxay Maco waqtigii wahaabiyada isku soo duuduub Asharaaf maanta weey ku dulman yihiin Somalia,Ethiopia iyo Djibouti, xoogaa waxaaba roon Kenya.
Waxaa sax ah, in kuwa dhibkooda ka hadli karo ay yihiin kuwa soomaaliya degan oo dulanka ku haayaan Maamulada , Alshabaab iyo nidaamyada meelahaas ka jiro.
Sii faahfaahi walaal.
Xigashada muhimka ahEdit
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Soo_bandhigida_xogta&oldid=197721"
Last edited on 13 Diseembar 2019, at 06:27
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Diseembar 2019, marka ee eheed 06:27.